Zvinodhura zvakadii kuchinja iyo iPhone skrini? | IPhone nhau
Zvinodhura zvakadii kuchinja iyo iPhone skrini?
Vese vashandisi vefoni chero ipi neyakagunzva vanogovana kutya: kuti mudziyo wedu unowira pasi uye tichaona kuti skrini yayo yakaputswa sei kuita zvidimbu zvine chiuru. Ndicho chikonzero nei vazhinji vachipedzisira vaisa girazi rakadzikama pane chero iPhone, kunyangwe nguva zhinji, sezvazviri neiyo iPhone 6 / 6s uye ayo akakomberedza mitsara, ivo vanosemesa zvishoma dhizaini yechigadzirwa. Asi ko kana yedu iPhone yaita tsaona tisati tamboidzivirira? Zvakanaka mhinduro ndeiyi chinja skrini kune iyo iPhone. Asi tinozvishandura kupi? Zvingani? Tinogona kuzvichinja?
Yese mibvunzo iyi ine mhinduro. Chinhu chakashata ndechekuti dzimwe dzemhinduro idzi hadzina kujeka, senge mutengo weiyo skrini. Pakazara uye kana ndikasasiya chero, pane anosvika gumi nemaviri mamodheru e iPhone, achiverenga iyo 12G iyo yakangotengeswa muUnited States uye maviri pamhando imwe kubva ku iPhone 2s-5c. Kana isu tasarudza kutenga chete skrini, mutengo unosiyana zvichienderana nemutengesi uye iyo iPhone modhi. Chero zvazvingaitika, pazasi iwe une iyo mitengo inofungidzirwa yeiyo iPhone skrini.
1 Iyo iPhone skrini inodhura zvakadii?
1.1 IPhone 3G skrini mutengo
1.2 IPhone 3GS skrini yemutengo
1.3 IPhone 4 screen mutengo
1.4 IPhone 4S mutengo wekuvhara
1.5 IPhone 5-5c mutengo wemuchina
1.6 IPhone 5s mutengo wekuvhara
1.7 IPhone 6 screen mutengo
1.8 IPhone 6 Plus mutengo wechiso
1.9 IPhone 6s mutengo wekuvhara
1.10 IPhone 6s Uye mutengo wechidzitiro
2 Ndekupi kwandinogona kuchinja iyo iPhone skrini?
2.2 Resellers uye mvumo Distributors
2.3 Chechitatu-bato SAT
Iyo iPhone skrini inodhura zvakadii?
Zvine musoro, mutengo zvinoenderana ne iPhone. Iyo 3.5-inch screen ye iPhone 3G haina kufanana neiyo 5.5-inch skrini ye iPhone 6s Plus. Uye hazvisi izvo, kukura padivi, ivo vakasiyana kwazvo. Sezvazviri mune zvese, avo vanotengesa iwo masikirini vanotora mukana wakanyanya kudiwa kwevashandisi vakapwanya skrini ye iPhone yavo nyowani. Kana isu tiine iPhone 3G uye skrini ichitsemuka, zvingangoita kuti tinofunga kuvandudza nhare uye ndicho chikonzero chikuru nei tichigona kuwana zviyero zvemidziyo yekare nemutengo wakaderera.
Ramba uchifunga kuti isu tinogona kuwana zvese online. Asi kana ukatsvaga, unogona kuona kuti iyo iPhone chidzitiro mitengo zvimwe kana zvishoma zvinotevera.
IPhone 3G skrini mutengo
Iyo iPhone 3G ndiyo yakatanga kutengwa pasirese. Sezvo iwe uchiziva, ine 3.5-inch screen uye yakaiswa kutengeswa muna 2008. Kana iwe ukatsvaga, iwe unogona kuona kuti mutengo wesikirini yako pakati pe € 14-23.
IPhone 3GS skrini yemutengo
Iyo iPhone 3GS ndiyo yaive yekutanga kupedzisa dhizaini dhizaini uye inosanganisira tsamba "S" yanga ichiperekedza mhando dzechipiri kusvika nhasi. Tinogona kuwana zviyero zvemutengo wakaderera wakaenzana neiyo iPhone 3G, asi iyo yepamusoro mutengo inowedzera zvishoma uye inogara pakati pe € 14-30.
IPhone 4 screen mutengo
Iyo iPhone 4 ndiyo yaive iPhone yekutanga iyo yakabata chaizvo ziso rangu. Yakanga yatove ne5MP kamera ine Flash, yaive yakakosha kwandiri. Kwete pasina kwaive yakanzi foni yegore. Iyo yakakwira mutengo weiyo skrini yakafanana neiyo iyo iPhone 3GS, asi iyo diki inowedzera zvishoma kuti ugare pakati pe € 17-30.
IPhone 4S mutengo wekuvhara
Iyo iPhone 4S yaive yechipiri kusanganisa yakakurumbira "S" uye wekutanga kugona kutaura naSiri. Uye zvakare, zvemukati zvemukati zvinoriita iro dombo rekare rinoramba richirwira nhasi, tisingataure kamera iyo yakawedzera kusvika 8MP. Mutengo wechiratidziri chayo wakada kufanana neiyo iPhone 4, saka tinogona kuiwana pakati pe € 17-30.
IPhone 5-5c mutengo wemuchina
Iyo iPhone 5 ndiyo yaive yekutanga kuenda kubva ku3.5 kusvika ku4 inches. Iyo yaisanganisira izvo zvinoitirwa vazhinji akanakisa dhizaini ye iPhone kusvika zvino uye yakaziviswa seye thinnest smartphone mupasi, kunyangwe yanga isiri yechokwadi zvachose. Tinogona kuwana ako masikirini emutengo uyo iri pakati pe € 40-45.
IPhone 5s mutengo wekuvhara
Iyo iPhone 5s yaive yekutanga foni munhoroondo kushandisa 64-bit processor, pamwe neyekutanga kushandisa sensor yeminwe yakashanda pasina matambudziko. Iyo inogovera dhizaini yeiyo iPhone 5, asi yakauya nemavara matsva, senge Space Grey kana, inokatyamadza zvikuru, Goridhe. Tinogona kuwana ako masikirini emutengo uyo iri pakati pe € 42-55.
IPhone 6 screen mutengo
Iyo iPhone 6 ndiyo yakatanga kurova. Yakaenda kubva pa4 kusvika ku4.7 inches uye yaisanganisira Chip yeNFC iyo inobvumidza iwe kuti ubhadhare nhare neApple Pay. Mutengo wescreen yako kazhinji kutenderedza € 50, asi pamhepo unogona kuwana zvimwe zve € 120. Ive nekuchenjerera neizvi, usashandise zvakapfuura zvakafanira.
IPhone 6 Plus mutengo wechiso
Iyo iPhone 6 Plus yaive hama yakura, nehukuru, yeiyo iPhone 6. Pamusoro pezvese zvinoitwa neiyo iPhone 6, ine yakakura 5.5-inch screen uye yayo vhidhiyo kamera ine optical mufananidzo stabilizer (OIS). Kuve skrini hombe kupfuura iyo yeiyo iPhone 6, tinogona kuwana inodhura skrini, asi inowanzove nemutengo mumwechete neiyo iPhone 6, inoisiya pakati pe50 ne120 €.
IPhone 6s mutengo wekuvhara
Iyo iPhone 6s yaive yekutanga iPhone kukwira kusvika ku2GB ye RAM uye iine 3D Kubata skrini. Kufanana neiyo iPhone 6, ine 4.7-inch skrini uye mutengo wayo unenge wakafanana, uri pamusoro 50-120 €.
IPhone 6s Uye mutengo wechidzitiro
Iyo iPhone 6s Plus ndiyo hombe vhezheni yazvino modhi kuvhura. Iyo ine zvese zvakafanana neiyo iPhone 6s, ine mutsauko wehukuru hwechiso uye iyo OIS. Mutengo wevose "6 mamodheru" wakafanana, saka iyo iPhone 6s skrini iri pakati pe € 50-120.
Chimwe chinhu chakakosha kuchengeta mupfungwa pamusoro pemitengo iri pamusoro ndeyekuti izvo zvinogona kuve mutengo wekutenga chete skrini. Kana iwe ukafunga kuutenga uye woenda nawo kunzvimbo yekusungirwa kuiswa, zvirokwazvo ivo vachakubhadharisawo basa iro pasina mamiriro ezvinhu richadzikira nezve € 20 (ehe, zvese zviri pa iPhone zvinodhura).
Iyo yakazara mutengo wekugadzirisa iyo skrini yeiyo iPhone 6 / 6s nekutora iyo kuApple iri dzinenge € 299, asi inoramba ingangoita zana nemakumi matatu kana tiinayo Apple Kutarisira. Zvine musoro, kunyangwe iyo skrini yaunowana online, haigone kuve nemutengo wepamusoro pane iko kugadzirisa kunoitwa neApple, asi paInternet tinogona kuwana zvese, zvese zvakanaka nezvakaipa.
Ndekupi kwandinogona kuchinja iyo iPhone skrini?
Zvine musoro, kwatinogona kunyatso shandura zviri kumutora kuenda kuApple Store. Zviri pachena kuti ndiyo inodhura kwazvo, asi zvakare iri bheji rakachengeteka. Kana zvikazoitika kuti nyanzvi yeApple inoita chero chikanganiso, tinogona kuva nechokwadi chekuti vachatarisira kugadzirisa patsva. Iko kune kunyange mukana wekuti ivo vatipe isu nyowani iPhone. Uye zvakare, zviitiko zvakaita sekukanganisa 53 zvinoratidza kuti hazvina kukodzera kubhejera nemidziyo yakatitorera padhuze ne1.000 €. Nekushandura iyo skrini tinogona kukuvadza chinhu chemukati uye, semuenzaniso, iyo ID ID inogona kumira kushanda. Muchidimbu, kana mari isiri nyaya, Apple yakanakira kuitarisira.
Resellers uye mvumo Distributors
Sarudzo yechipiri ndiyo mvumo zvivakwa. Aya masisitimu ndeavo anofungidzirwa neApple kusangana nehunhu hwehunhu uye anogona kutarisira kugadzirisa. Aya masisitendi anogona kubhadharisa zvakafanana neApple, asi kune zvakare mukana wekuti vachatibhadharisa zvishoma zvishoma. Ehezve, kana dambudziko rikaonekwa uye kunyangwe risiri iro rakajairika, vanogona zvakare kuisa rimwe dambudziko kwatiri uye izvo zvinogona kunetsa.
Sarudzo yechitatu ndeyekutora kune a kusimbisa kupa iyo sevhisi. Izvi zvakafanana nemusangano wedhorobha redu, uya unongogadzirisa injini yerori inoisa chigamba pane vhiri rebhasikoro redu. Sevanyanzvi zvavari, vanokwanisa chose kuita basa uye kazhinji havawanzobhadharisa zvakawanda, asi isu tinofanirwa kungwarira nekuti tinogona kusangana nemunhu anotivimbisa mwedzi uyezve haaite nemazvo kana kupindura basa risina kuitwa zvakanaka. Izvo chaizvo zvakaita rotari: iwe unofanirwa kuiridza uye isu tichiri kuhwina yakawanda, asi isu tinogona zvakare kurasikirwa. Ndiye mushandisi anosarudza kuti abheje here kana kuti arege ichipfuura.
Chekupedzisira, tinogara tine sarudzo yekuzviita pachedu. Zviripachena kuti hapana munhu anogona kuzvishandura, asi zvinokwanisika kune avo vane ruoko. Kana iri yako nyaya, chinhu chakanakisa chaungaite kutsvaga skrini online (Amazon inowanzove nezvipo zvakanaka) uye, kana zvichibvira, sanganisira maturusi anodikanwa, tobva tafamba iPhone yekugadzirisa chikamu de iFixit uye isu tinotevera kune iyo tsamba iyo dzidziso iyo ivo yavanenge vaburitsa kuti vachinje iyo skrini kune yedu iPhone.
Zvine musoro, kana tikasarudza kushandura iyo skrini isu pachedu nekutarisa iyo iFixit gwara, isu tichafanirwa kutarisa iyo yakanangana gwara kune yedu iPhone. Kunyangwe, semuenzaniso, iyo iPhone 4 inofanira kunge yakafanana neiyo 4S, modhi inogona kugara iine Hardware iyo imwe modhi isina, sezvazviri mune imwe maikorofoni yakawedzera muiyo iPhone 4S iyo inobvumidza Siri kuti itinzwisise.
Iko yako iPhone skrini yakaputsika uye iwe wakaigadzirisa? Usazeza kutitaurira nezve chiitiko chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Zvinodhura zvakadii kuchinja iyo iPhone skrini?
Hazvina kunyatsoitika. Iyo iPhone 6 inogadziriswa kwazvo. Mune yangu kesi iyo skrini yakaputswa uye ini ndakaichinja kuita apuro ye € 115. Muchokwadi, hazvikurudzirwe kuti uchinje kunze kweapuro.
Chaizvoizvo. MuSpain ndakaichinjira kuApple yeUS $ 115.
Zvakare, kana iwe ukachinja kunze kweApple, haungorasikirwa chete newaranti, asi iwe unorasikirwa nerutsigiro rwese rwepamutemo. Ndakaona zvinotevera mamiriro muchitoro: Mumwe musikana aive muApple Chitoro nekuti yake iPhone yaisazotanga. Paakangoti tekinoroji akaona nharembozha akabva aziva kuti sikirini yakanga isiri yepamutemo uye kuti yakanga isati yagadziriswa ipapo. Akabvunza musikana uye akasimbisa, akange agadzira iyo skrini kumwe kunhuwo kumberi. Nyanzvi yakamuudza kuti aive arasikirwa nerutsigiro rwepamutemo uye kuti havachagadzirisa, kuti kana achida aigona kutenga iPhone nyowani.
Sergio Anton akadaro
MuApple kubva muna 2017 ndeye anodarika € 160 uye vanotora nguva yakareba kuita musangano. Ivo vanowanzo kubhadharisa zvishoma uye vanokupa iwe wakagadziridzwa kuti mukufamba kwenguva kunonoka uye izvo zvisina kufukidzwa newarandi: - /
Kugadzira iPhone muMadrid akanakisa ari Tabili, vanozviita pamberi pako uye mumaminitsi makumi matatu chete. Vanoisa zvidimbu zvepakutanga uye chinhu chakanakisa ndechekuti iwe unochengetedza mutsara pamusika nekuti unoenda wakananga kumba kwako. Nezvechitanhatu ivo vachange vandibhadharisa zvimwe kana zvishoma € 30, uye vanovimbisa kugadziridzwa kwemakore maviri. Kusiyana neApple inoshambidza maoko ayo zvachose.
Pindura Sergio Antón
Ngatione, iyo posvo inoita senge inoratidza kwandiri, asi yadonha zvishoma. Ini ndinofanira kutaura zvishoma nezve zvakanakira AppleCare uye nezvakaipira zvikamu zvechitatu-bato, ipapo mvura, tembiricha isiriyo uye zvimwe zvinokundikana zvinoonekwa.
Ichokwadi zvakare, kuti kana vachinge vapiwa garandi vanoisa imwe tsvuku skrini, ndakanyunyuta uye vakaisa imwe yaitaridzika kunge iri nani.
Haisi chokwadi kuti kana uchigadzira Hardware shanduko mu iphone inokiya? kana izvo ndezve chete neshanduko yeImba bhatani?
Ini ndakachinja chinovhara cheiyo iPhone 6 muchitoro cheApple nekuti yakatsemuka (yaive nemudziviriri) pakona, vakaichinjira 110 euros, uye ndinofanira kutaura kuti haisati yatyorwa futi uye ndauya neiyo nyowani sikirini isina mudziviriri, asi icho Chino gumbura zvakawanda ndechekuti mushure memazuva mashoma ndakaona kuti sikirini yakanga isina kukodzera, kana ukatsimbirira pakona rezasi chidzitiro chaizofamba sekunge nyaya yacho yakanga yakakombama, uye ndozvazviri Ini handizive simba raishandiswa kugadzirisa iyo iPhone 6, asi tichifunga kuti vakamisidzana ne bendgate vangadai vakatoshandisa imwe hanya nekuti vasiya yangu iPhone yakakombama kunyangwe isingaoneke kune vasina kupfeka ziso
Yangu iPhone 6 (kwete Plus) yakakombama zvishoma uye skrini yakatsemuka sekutaura kwemukomana, diki joko nezvinhu izvozvo, ikozvino ndine 6s Plus uye izvi hazvikotame kana kuseka.
Kwaziso uye rombo rakanaka neizvozvo, ini ndaizodaira.
Jose Mari akadaro
Ndiudze kwaunovawana vakachipa kwazvo
Akandiisa mukubatana neapuro yekutsiva iyo skrini yeyangu 6 kuwedzera kunze kwegore rewarandi uye vakandikumbira € 351
Pindura kuna Jose Mari
Akandikurudzira nzira mbiri kuSpain:
- Enda kune Apple Chitoro uchikumbira musangano. Iyo yekugadzirisa skrini ye iPhone 6 inenge € 115 uye inotora anenge maawa maviri. Iyo waranti haifukidze kuputsika kwechidzitiro. Apple Kuchengeta muSpain Ini handifunge kana.
- Tumira iyo iPhone nepositi. Vanokuchaja kukosha kweiyo iPhone nyowani pakadhi uye vanokutumira iyo iPhone nyowani zuva rinotevera. Ivo vanochengeta yako uye, kana izvo zvakakuvara zvayedzwa, vanokudzosera iwe chikamu chemari. Mari iyo kumagumo ehurongwa iwe yawakabhadhara ndiwo mutengo wekugadzirisa, uyo usingakwanise kuzivikanwa a priori nekuti kuongororwa kwekukuvara kunoitwa kana vagamuchira foni yako.
Mune tabili vanozviitira kwe € 110 zuva rimwe chetero. Ini ndinotenda ndeimwe yenzvimbo dzakavimbika kwazvo kugadzirisa iphone muMadrid. Vanokupa 2-gore garandi uye vanoenda chero kwaunoda kugadzirisa yako nhare. Mune yangu nyaya havana kusiya kusvikira nhare yangu yaive 100% sezvandaida
Yakawanda sei kukanganisa mune ino positi. Iwe unofanirwa kutsvaga usati wanyora chimwe chinhu chakadai. Ukaenda kune webhusaiti yeapole unoona mitengo uye haienderane zvachose nezvaunotaura, zvakachipa. Chimwe chinhu ndechekuti kunze kwescreen kesi yacho yatyorwa kana kupwanywa, mune iyo mutengo mutengo unoshanduka zvakanyanya.
Yechitatu-bato mashopu haana kudhura sezvaunotaura. Vanobhadharisa zvakafanana neapuro, zvimwe zvakatowanda.
Uye kune rimwe divi, kunyangwe kana iyo skrini ikachinja apuro yakagara, iyo garandi iwe watotadza. Nekuda kwekuvhunduka kwakagamuchirwa nefoni, Apple inomesa garandi
Iyo 6s pamwe skrini inokodzera € 175 kana iri pasi pewarandi, mitengo iri pawebhusaiti yepamutemo.
Ikozvino, vandibhadharisa € 351 uye vakandipa yakagadziriswazve, ndichigadzira dambudziko raisavapo. Ngwarira zvakanyanya neApple SAT
Ernesto A akadaro
Ivo vakaitawo zvimwe zvakafanana neni @billyjoe pavai gadzira yangu iphone 6s plus muMadrid kuApple. Ini ndakaguma ndobhadhara € 381 yeyakagadziridzwa (zviri pachena kwazvo kuti mutengo wakakwira kwegore) uye ndakanga ndisingafare kwazvo. PASI PASI VANOEDZA KUKURARA SEI SEZVAKAITWA ZVAKAWEDZESWA SEZVAKAWEDZERA ASI WAZVARIPA ZVIMWE.
Chaizvo DZIDZA iyo Apple SAT.
Pindura kuna Ernesto A
PANE ANOZIVA kuti zvingandidhurira zvakadii kugadzirisa iyo iPhone 5?
Ndakaigadzirisa mumatabiri makumi manomwe nemashanu. Vanoenda kwaunoda uye zvakatora semaminetsi makumi maviri.
Maitiro ekudhawunirodha iyo nyowani iPhone SE uye iPad Pro mifananidzo